နားဦးတည့်ရာ သုံးဆယ့်ခြောက် – မွန်းအောင် ( ငြိမ်းချမ်းရေး တိုက်ပွဲ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Music » နားဦးတည့်ရာ သုံးဆယ့်ခြောက် – မွန်းအောင် ( ငြိမ်းချမ်းရေး တိုက်ပွဲ)	7
Posted by မြစပဲရိုး on Jul 22, 2015 in Music |7comments
. အခု ရွေးကောက်ပွဲဝင် မဲ့ လူ တွေ ကို လှောင်သလို ပြောနေတဲ့ စာ တွေ မြင်နေရတယ်။
. ရှေကလဲ မသွားနိုင်၊ နောက်ကလဲ မလိုက်တတ်၊ ဇော်ကန့်လန့် တွေ များ နေလို့ ဒီ အာဏာရှင်တွေ ဒီလောက် မြဲ နေတာပါ။
. အာဏာရှင် ဆိုတာ အာဏာ နဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာနေသူ နဲ့သူတို့ ကို ကာကွယ်ပေးနေသူ တွေ တစ်ချို့ ကို ဆိုလိုပါတယ်။
. အာဏာရှင် ဆိုတာ နဲ့ စစ်တပ် နဲ့ စစ်သား ကို မမြင်ကြပါနဲ့။
. တကယ်တော့ သူတို့ က ရန်သူမဟုတ်ပါဘူး။
. အာဏာရှင်များ ရဲ့ အရိပ်ကျ နေတဲ့ ပြည်သူထဲ က လူ တွေပါဘဲ။
. မတရားမှုပြု၊ လူတွေပေါ် အညွန့်ခူးစား နေတဲ့ လူ မဟုတ် သူတိုင်း
. အနာဂါတ် မြန်မာပြည် အတွက် ငြိမ်းချမ်း စွာ ပြောင်းနိုင် မဲ့ အပြောင်းအလဲ ကို လိုလားကြပါ။
. အာဏာ ကို ခုထိုး လုပ် ကိုယ်ကျိုးရှာပြီး တိုင်းပြည် နဲ့ လူထု ကို ဆင်းရဲတွင်း ထဲ ချထား သူများ ကို လက်မခံ ကြောင်း ပြသပေး ကြပါ။
. ပြည်သူ အားလုံး အတွက် တရားမျှတ ကို ရယူ မဲ့ အမှန်တရား တစ်ခု အတွက် အာဏာရှင်များ ကို တိုက်ဖို့ ညီညွတ်မှု စည်းလုံးမှု အမှန်တရားသစ္စာ ကို သိမှု များ နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ပေးကြပါ။
မွန်းအောင် – ငြိမ်းချမ်းရေး တိုက်ပွဲ
* အေးငြိမ့်ငြိမ့် စိမ့်ရေစီးတဲ့ မြကန်
* တိုးတိုးလေးဖွဲ့ဆို တေးချင်းတစ်ပုဒ် ကို
* မှေးစက်မဲ့ ဆိတ်ငြိမ်ညတို့ ရှိစေ
* နီတဲ့သွေး ရဲရင့်လို့ ခြေကိုလှမ်းရှေ့ကို ချီတက်ခဲ့ပြီ
* ရင်းထားတဲ့ အသက်တွေ အစားထိုးပေးလှူ
* ကိုယ့်ဖက်က အလှည့် ကို ရောက်မှ မနွဲ့သာ
* စိုက်ခဲ့သမျှ တို့ရိတ်သိမ်းရတော့မယ်
* အခါတိုင်ပြီ လက်မလွတ် နဲ့
* မကြေတဲ့ အကြွေးဆပ်ရန် ချီတက်ခဲ့ပြီ
* မိုးမခပင်တွေ တို့ သက်သေတည်
* စိမ်းယဉ်သော အေးမြကန်သာမြေ
* ရိုးမတောင်ခြေ နေရောင် မခတဲ့ တောင်တွေ
* စိုးစဉ်းမျှ စိုးရိမ်ကြောက်စိတ် မရှိတယ်
* ခင်းထားတဲ့ လမ်းဟာ တို့ရဲ့သစ္စာ
* ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် တိုက်ပွဲရှိရမယ်
* နီတဲ့ သွေး ရဲရင့်လို့ ရန်သူ မင်း ရှေ့ကို ချီတက်ခဲ့ပြီ
မြစပဲရိုး says: * ရင်းထားတဲ့ အသက်တွေ အစားထိုးပေးလှူ
မြစပဲရိုး says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခု လှောင်တဲ့ သူတွေ အသုံးကျရင် ဒီ အထိတောင် စစ်ကျွန်သက်မရှည်ဘူးးး
ခု စု ကို ဝန်းရံသူတွေ လောက် သတ္တိမရှိပဲ ဘုပြောနေတာလောက်တော့ ထည့်မစဉ်းစားတော့ပါဘူးးး
တောင်ပေါ်သား says: ကမာရွတ်ကဝင်မယ့်သူက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါချုပ် ဒေါက်တာအောင်သူ လို့ကြားတယ် ၊ သေတော့မသေချာသေးဘူး ၊
ဒါနဲ့ ကြုံလို့ပြောရဦးမယ် အရီးရေ ၊
ရပ်ကွက်ထဲက မဲစာရင်းမှာ ကျနော့်နာမည်က ၂ နေရာပါနေတယ် ၊
ကွာရှင်းထားတဲ့ ဟိုမိန်းမ ခဏငှားနေသွားတဲ့တိုက်ခန်းမှာ သူ့နာမည်ကော ကျနော်ကော တဲ့ ၊
ဒီမိန်းမက လက်ရှိ ဒူဘိုင်းမှာ ၊ တိုက်ခန်းမှာက နောက်အိမ်ငှား ၊ သူတို့ကျ မပါ တဲ့ ၊
အမေပြောလို့သိတာ ၊ ကျနော်က မဲ ၂ ခါပေးရမှာလားဟင် ?
Courage says: ၈/၈၂ အင်းလျားဆိုတာ ကျွန်တော် ဂစ်တာတီးတိုင် အမြဲဆိုနေကျသီချင်းပေါ့။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော်က မွန်းအောင်ရဲ့သီချင်းထဲမှာ နိုင်မင်းရေးတဲ့
Swal Taw Ywet says: ကမျိုးရေ
မနေတဲ့အိမ်က စာရင်းကို ပယ်ဖျက်လုပ်လိုက်ပါ။ တော်ကြာ သူများမဲဖြစ်သွားပါအုံးမယ်။
လုပ်စရာရှိသာလေးတွေ တာဝန်ကျေကြမှ ခင်ဗျ။